Hafa Services Provided
Web Design & Internetfaran'izay contabili2019-02-02T11:47:33+00:00
Ve ny orinasa manana anatrehan'ny Web?
Web anatrehan'ny dia teny izay manondro ny fitaovana izay hisolo tena ny orinasa ao an-nomerika tontolo iainana.
Amin'izao fotoana izao dia efa maro sy fitaovana kokoa mba hiditra amin'ny aterineto, ranging from traditional computers to smartphones.
Amin'ny teny hafa, tranonkala anatrehan'ny dia lalana izay mitondra any amin'ny fananganana ny fahefana sy ny fitokisana amin'ny Internet.
Izany dia mamela ny marika ho heverina ho iray amin'ireo andinin-tsoratra masina ny mpitarika iray ho ampahany.
Noho izany, mieritreritra momba ny tena zava-dehibe dia ny manana anatrehan'ny amin'ny aterineto sy ny fitomboan'ny ny raharaham-barotra, Manam-pahaizana amin'ny Accounting isika no nanao sonia ny fiaraha-miasa amin'ny 2KS Digital Agency, ny manam-pahaizana manokana amin'ny nomerika barotra.
Fanolorana tolotra izay miainga amin'ny fananganana habaka sy ny fampiantranoana ny sary famolavolana sy ny media sosialy ny fitantanana.
Amin'izao fomba izao, dia mikatsaka ny drafitra paikady izay tolo-kevitra javatra dia avy amin'ny asa mba hampiroboroboana sy mampitombo ny vokatra / asa ny raharaham-barotra, tsara nahatonga an'ilay zanakao lazanao, fitokisana sy ny fampitomboana ny varotra.
Ny tanjontsika dia ny hametraka ny raharaham-barotra ao amin'ny toerana malaza tao an-tsena.
Te-mitombo ny raharaham-barotra? Voakasika ve ianao mikasika ny fampitomboana ny maha ho an'ny marika? Mila mba hanatsarana ny fifandraisanao amin'ny mpihaino, na mitaona mpanjifa vaovao? Dia tonga ny fotoana ny vola amin'ny nomerika barotra!
'2ks Agência Digital' mety hahatonga anao ho kokoa ny varotra, fiovam-pony, Leads sy ny fitsidihana ny raharaham-barotra eo amin'ny Internet!
Jereo ny franchise Program
Afaka manampy mba hanokatra ny biraon'ny fitantanam-bola!
Aza mandany fotoana! Mahay miara-miasa aminy sy ny kandidà nandray mampihatra ho an'ny franchise fandaharana. Raha hamantatra miaraka amin'ny politika sy ny filozofia hialoha ho fisoratana anarana amin'izao fotoana izao!
Hiaraka aminay ANIO!
Avenue Sao Paulo (Galeria São Paulo) efitrano 8 - Vila Brasilia, Aparecida de Goiania - GO, 74905-770